Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0413 tal
Ny lafiny mampidi-doza amin'ny tombotsoa manokana
Talata 23 Apr.
Tsy noferana teo amin’ny toe-javatra nisy ara-tantara teo amin’ny Isiraely fotsiny ny hafatra ara-paminaniana nentin’i Amôsa. Nokendrena hivelatra hatrany ivelan’ny Isiraely sy ny Joda mihitsy izany. Ao amin’ny Testamenta Taloha ny Isiraely dia nanana tombontsoa manokana teo amin’ny fifandraisany tamin’ Andriamanitra, kanefa tsy voafetra ho azy ireo irery izany.
Vakio ny Amô. 3:1,2. Misy hevitra manokana milaza fifandraisana ety dia ety ny teny hebreo hoe yada, nadika hoe “fantatro,” izay ampiasaina eo amin’ny and. 2. Ao amin’ny Jer. 1:5, ohatra, dia milaza Andriamanitra fa “fantany” i Jeremia mpaminany ary hatry ny fony izy tsy mbola teraka no efa nohamasininy. Toy izany koa ny amin’ny Isiraely. Tsy hoe firenena miavaka amin’ny hafa rehetra fotsiny izy fa nohamasinin’Andriamanitra ho amin’ny tanjona masina nokendreny mihitsy. Araka izany dia nanana fifandraisana manokana tamin’ Andriamanitra izy ireo.
Andriamanitra mihitsy no efa nifidy ny Isiraely ary nanafaka azy tamin’ny fanandevozana. Ny fialana avy tany Egipta no toe-javatra tokana sady goavana indrindra teo amin’ny fiantombohan’ny tantaran’ny Isiraely amin’ny maha-firenena azy. Io no nanomana ny asam-panavotana nataon’Andriamanitra sy ny famaboana ny tany Kanàna. Ny hery nananan’ny Isiraely sy ny firoboroboan’ny hareny anefa dia nitarika azy ho amin’ny fireharehana sy ny avonavona teo anatrehan’ny maha-vahoaka voafidin’Andriamanitra azy.
Vakio ny voalazan’i Kristy ao amin’ny Lio. 12:47,48. Ahoana no fahatakarantsika ny fitsipika ampianariny ao izay milaza hoe: rehefa ampiasaina tsy araka ny tokony ho izy ireo tombontsoa lehibe eo amin’ny fiainana, dia hisolo famaizana lehibe tokoa?
Teo ambany fitarihan’Andriamanitra no nampitandreman’ny mpaminany fa hotanana ho tompon’andraikitra ny amin’ny asany ny vahoaka isiraelita amin’ny maha-vahoaka voafidin’Andriamanitra azy. Lazain’ny Tompo fa mitaky andraikitra ny fifandraisan’ny Isiraely manokana amin’Andriamanitra ka famaizana no hitranga raha tsy tanteraka ireo andraikitra ireo. Raha hazavaina amin’ny fomba hafa dia izao: Isiraely, amin’ny maha-vahoaka voafidin’Andriamanitra azy, dia mora iharan’ny fitsarana bebe kokoa izy satria ny tombontsoa dia mitaky andraikitra. Tsy ny hananany tombontsoa manokana fotsiny no nifidianana ny Isiraely fa nantsoina ho vavolombelona amin’izao tontolo izao ihany koa izy ireo momba Ilay Andriamanitra Izay efa nandrotsaka fitahiana safononoka ho azy ireo.
“Nasondrotra ho amin’ny tombontsoa ambony indrindra ireo fiangonana milaza fa an’i Kristy amin’ity taranaka ity. Naseho antsika tamin’ny fahazavana mitombo hatrany ny Tompo. Lehibe lavitra noho ny tombontsoan’ny vahoakan’Andriamanitra fahiny ny tombontsoantsika” — HF, t. 279. Saintsaino ireo zavatra rehetra efa nomena antsika Advantista mitandrina ny andro fahafito. Nahoana no tokony hampangovitra antsika ireo andraikitra izay tsy misaraka amin’ireo tombontsoa ireo? Izany tokoa ve no mitranga amintsika sa lasa zavatra mahazatra antsika fotsiny izy ireny? Sa ve isika manjary afa-po ka mianina fotsiny amin’izay rehetra efa nomena antsika? Raha izany no izy, ahoana no fomba hahafahantsika miova?